July Dream: Believe those Hero
Posted by JulyDream at 2:40 PM
ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ဒီဘူတာပဲ ဆိုက်မှာပါ ကိုဇူလိုင်ရယ်…။ ဆုဝေတို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အဆင်မီဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြလို့သာ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်သင့်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ထဲ မှာ ရေးသလိုပေါ့ ...
မင်းဆိုးတော့ တိုင်းပြည်လည်း ကမောက်ကမဖြစ်ရပြီလေ။
really good !! feel sorry !!
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး တစ်ကယ် ဗဟုသုတ ရလိုက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက သူများတွေပြောတာကိုဘဲ နားထောင်ပြီး အဟုတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အတွေးတွေကို ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါပြီ။ :)
ကောင်းတယ် ဗျ ... ရှင်းပြမှ :D
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို တည်ဆောက်နေပေမယ့် အဆင့်မြင့် မြို့ပြကာကွယ်ရေးမှာ အလွန်အရေးပါလှတဲ့ မီးသတ်စနစ်တွေ မီးသတ်ကိရိယာတွေ မီးသတ်ကားတွေကို အဆင့်မြင့်တင်မှု မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။
တုံးတယ်ပြောလည်း ခံရမှာပဲဗျာ .... ကိုဇူလိုင် မေးပြောမေးပြောလေး ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော်လည်း အရင်က စဉ်းစားမိခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာလို့ မီးသတ်ကားတွေ ရေမပတ်ပဲ တန်းစီရပ်နေတာလဲ ... ဘာလို့ မီးသတ်ရဲဘော်က ၂ ယောက် ၃ ယောက်ပဲ ရှိရတာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ ... စဉ်းသာစဉ်းစားတာ နောက်ဆုံးတော့လည်း အဖြေမရပါဘူး ... မေတ္တာထိုင်ပို့ပြီး ပြန်လာတာပဲ များပါတယ်။ အခုတော့ ဘာ့ကြောင့် ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဗျာ .. ကောင်းကောင်းလည်း နားလည်သွားပြီ ... ကြားဖူးတာလေး တစ်ခုက လူတစ်ယောက်ဟာ နေ့တစ်နေ့ အတွက် အသိဥာဏ်ပညာသစ်တစ်ခုကို အဲဒီနေ့မှာ ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့နေ့အတွက် သူ အသက်ရှင် ရပ်တည်လိုက်ရတာ ထိုက်တန်သတဲ့ .... ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်အတွက် အသိပညာသစ်တစ်ခု ရှိလိုက်တာပဲ ဗျို့ .... ကျေးဇူး ကိုဇူလိုင်ရေ ...
မသိတာလေးတွေ သိလိုက်ရပါတယ် .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇူလိုင် ..
ရိုးသား ကြိုးစား စွန့် လွတ် အနှစ်နာခံ လုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်း တခြားနေရာ ဌာနတွေလိုမှာလိုပဲ ရှိမှာပါပဲ။
မီးသတ်အလုပ်ဟာ တော်တော်အန္တရယ် များတဲ့အလုပ်ပါ။ လုံလောက်တဲ့သင်တန်းတွေ ကရိယာတွေ စက်ပစ္စည်းတွေ မထောက်ပံ့ မဖြည့်စည်းထားပဲ ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ လူသတ်ကွင်းထဲ လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေ တိုင်းသူပြည်သားပေါ် ဘယ်လောက်စေတနာ မဲ့သလဲပေါ်လွင်ပါတယ်။
ဆေးရုံတွေရှိ ဆရာဝန်တွေရှိ ပြီး ဆေးမရှိသလိုပါပဲ။
ဒီပိုစ့်ကနေ ဗဟုသုတ အများကြီးရလိုက်ပါတယ်
ကောင်းတယ် ကိုဂျူလိုင်...မီးငြိမ်းသတ်တဲ့ စနစ်ကို သေချာရှင်းပြသွားတာ သဘောကျတယ်..။
ခုလို သေချာရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မှန်ပါတယ်ဗျာ။ ယန္တရားလည်ပတ်ရေးမှာ အဓိက လုပ်ဆောင်သူနေရာက အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေကို ကျွန်တော်ယုံပြီးသား။ ထင်မိတာက အပေါ်က ချမပေးဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်။ အပေါ်က ဘက်ဂျက်ပေးထားလိမ့်မယ်။ လုပ်လို့လည်း ပြောထားမှာပဲ။ ရန်ပုံငွေတွေလည်း ကောက်တယ်။ ပြက္ခဒိန်တွေလည်း ရောင်းတယ်။ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့ မီးသတ်ဘူးတွေကို ဒိတ်အောက် မအောက် မသိရတဲ့ Refill တွေ ၀ယ်ဖြည့်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီ ရန်ပုံငွေတွေကို အထက်ကတော့ မယူလောက်ဘူး။ ဒီဌာန အတွင်းမှာပဲ ပြန်သုံးဖို့ စီမံခိုင်းလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဋ္ဌာနရဲ့ အပြစ်ကအများဆုံးပဲထင်ပါတယ်။
ကိုTnT ရေးခဲ့တဲ့ ကွန့်မန့်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်လေး ပြောကြည့်ပါမယ်။
ရံပုံငွေတွေ ပြက္ခဒိန်တွေ၊ မီးသတ်ဆေးဗူးတွေ ရောင်းရငွေဟာ ခေတ်မှီ မီးသတ်စနစ်၊ မီးသတ်ကား ဝယ်နိုင်တဲ့ ပမာဏမှာ မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ရတဲ့ငွေတွေဟာ ဝန်ထမ်း သက်သာချောင်ချိရေးအတွက်မှာ အသုံးပြုမယ် ထင်ပါတယ်။ မီးသတ်သမားတွေရဲ့ လခကလည်း နှစ်ပဲခြောက်ပြားလေးပါ။
အပေါ်က ဘတ်ဂျက် ချပေးတယ် ဆိုတာမှာ မှန်ပါတယ်။ ချပေးပါတယ်။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအတွက် ဘယ်လောက် ရသလဲဆိုတာတော့ ဝန်ကြီးတွေ အသိဆုံးပါ။ ဘတ်ဂျက် အတော်ကို နည်းပါတယ်။ အဲဒီဌာနမှာ မီးသတ်ပဲ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းတွေ၊ မသန်စွမ်းဂေဟာတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုဂေဟာတွေ၊ လူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ ခေတ်မှီ မီးသတ်စနစ်တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ မီးသတ်ကားတွေ ဝယ်နိုင်တဲ့အထိ မရှိပါဘူး။ ဒါတောင် ဂျပန်က လှူထားတဲ့ မီးသတ်ကားတွေ ရှိနေလို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ပြာပုံ မဖြစ်သေးတာပါ။
ဘတ်ဂျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှာတောင် တာဘိုင်ကြီးတွေက ပစ္စည်းတစ်ခု ပျက်သွားရင် အစားထိုးဖို့ အသင့်မရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားကနေ မှာနေရတာကြောင့် မီးတွေ ပျက်နေတာ ကြာလှပါပေါ့။
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ လှူထားတဲ့ သူနာပြုယာဉ်တွေ၊ ရေပေါ်လျှပ်ပြေး ဘုတ်တွေ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ အကြောင်းတွေကို ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မမောင်းတတ်မှာ စိုးလို့တဲ့ ကွယ်။
သိထားသလောက်လေး ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ။ မျှမျှတတ ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။ =)
အသံတိတ် သူရဲကောင်းတွေကို လေးစားတယ်ဗျာ။
အဲဒီ အရောင်ပြောင်းသွားတာကြောင့်ပဲ နောက်ထပ် လှူမယ့်သူတွေ လက်တွန့်သွားရတာနေမှား)
အဆောက်အဦဆိုရင် ဘယ်လို လိုအပ်ချက်ကိုညီရမယ်၊ လမ်းဆိုရင် ဘယ်လိုလိုအပ်ချက် ကိုက်ညီရမယ် စသဖြင့် အခန်းကဏဿဍတိုင်းမှာ အခြေခံလိုအပ်ချက် (standard) တွေကို ပြည့်မီအောင် စနစ်တကျနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှ ဘေးအနဿတရာယ်ကင်းရေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပာ။
ဗဟုသုတ ရရှိပြီး မီးသက်ရဲဘော်တွေ အပေါ်နားလည်သနားမိပါတယ်ဗျာ ဒီလိုပိုစ့်ရေးလို့လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ကိုဂျူလိုင် ....... အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ့်ပါ
ဒီစာစုကို ဖတ်အပြီးမှာ အမြင်တွေ ပိုရှင်းသွားပါပြီဗျာ၊ ကျေးဇူးပါ
အကျိုးရှိတဲ့ စာ ပါ။ လူတွေက ကိုယ်ထင်ရာ ပြောတတ်ကျတာမျိုးပါ။
ညီမတို့တွေလည်း အရင်က ဒီလို အသေးစိတ်မသိဘူး ကိုဂျူလိုင်ရေ..။